रामकाहानीले राम्रो व्यापार गरे :यस्तो छ चलचित्र रामकहानी – Rastriyapatrika
रामकाहानीले राम्रो व्यापार गरे :यस्तो छ चलचित्र रामकहानी
यो साता प्रदर्शनमा आएको चलचित्र रामकाहानीले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । चलचित्र प्रदर्शनअघि प्रचारका निम्ति खटिएको चलचित्र युनिट दर्शकलाई चलचित्र हेर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्न हलहरुमा पुगेर प्रतिकृया लिन समेत भ्याइरहेको छ । सँगै दर्शकले पनि चलचित्रलाई निकै रुचाएका छन् । कतिपय दर्शकहरु चलचित्र हेरेर निस्कँदा चलचित्रका वास्तविक कलाकार सामुन्नेमा देखेपछि डाँको छोडेर रोएको दृष्यहरु पनि देखिने गर्छ ।
सुदर्शन थापाद्वार निर्देशित चलचित्र रामकहानी समग्रमा राम्रो बनेको छ । पूजा शर्माको लोभ लाग्दो फ्यान फलोइङले पनि चलचित्रलाई फाइदा पुर्याएको छ ।
त्यसमाथि पनि निर्देशक सुदर्शन थापा प्रेमकथामा आधारित चलचित्र निर्माण गर्न माहिर छन् । यसको उदाहरण उनले निर्माण गरेका यसअघिका चलचित्रहरु प्रेमगीत, म यस्तो गीत गाउँछु लगायतका चलचित्रहरुले देखाईसकेका छन् ।
चलचित्रमा कमेडी कलाकारहरुको बाहुल्यता रहेको छ । र उनीहरुले चलचित्रमा मसला थप्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । चलचित्रमा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ बीचको प्रेमलाई निकै आकर्षक ढंगबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पूजा शर्मा चलचित्रको मुख्य अभिनेत्री सँगै निमात्री निर्मात्री समेत हुन् । प्रेमभाव, कमेडी, पारिवारिक अवस्था, वैदेशिक रोजगारी लगायत ‘हरर’ चलचित्रको झल्को समेत दिने गरि चलचित्रको कथा वस्तुलाई समयोजन गरिएको छ ।
कथा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति गएका केही युवाबाट सुरु हुन्छ । उनीहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएर पनि त्यहाँको जेल जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । उनीहरु कुनै गल्तीबिनै जेल सजाय भोग्न बाध्य भएका हुन्छन् । उनीहरु जेल भित्रै आफ्नो मृत्युको पर्खाइमा हुन्छन् ।
उनीहरुमध्ये एक युवा राम (आकाश श्रेष्ठ) निकै भावुक हुन्छन् । र उनी बारम्वार सँगै जेल चलान भएका साथीहरुलाई सम्झाइरहेका हुन्छन्, ‘हामीलाई केही हुँदैन, हामी जसरी पनि आफ्नो भूमी फर्किन्छौं ।’
ट्रेकिङ गाइडको काम गर्दा माया र रामको माया बसेको हुन्छ । राम परिवारको करकापमा परेर विदेश पुगेका हुन्छन् । तर विदेशमा पनि उनलाई मायाकै यादले तड्पाइरहन्छ । रामलाई विश्वास छ, मायासँग गरेको वचनले बचाएर उनलाई नेपाल फर्काउने छ ।
तर, भित्रभित्रै उनीहरुलाई मरुभूमीमा लगेर गोली हानी मार्ने तयारी गरिन्छ । उनीहरुलाई पासपोर्ट दिइन्छ र लिएर भाग्न भनिन्छ, अनि मरुभूमीतिर दौडाइन्छ । त्यसपछि पछाडिबाट गोली प्रहार गरिन्छ ।
त्यसपछि के हुन्छ ? उनीहरु कसरी आफ्नो प्राण जोगाएर स्वदेश फर्कन्छन् ? त्यो भने हलमै गएर हेरे पछि थाहा हुने छ । यसरी चलचित्र सुरु भएपनि चलचित्रको मूलकथाले भने यससँग कुनै सम्बन्ध राखेको छैन ।
कमेडी कलाकारहरुको बाहुल्यता हुनुले चलचित्र हेरिरहँदा दर्शकहरुलाई पुरै मनोरञ्जन दिन्छ । केदार घिमिरे, विल्सनविक्रम राई, रविन्द्र झा लगायतका हाँस्यकलाकारहरु दर्शकको खुलेर हास्ने माध्यम बनिदिएका छन् ।
धेरै नेपाली चलचित्रहरुको कमजोरी पक्ष एउटै हुन्छ, दर्शकले हलमा गएर चलचित्र हेर्न थालेपछि सुरुवाती चरणमै चलचित्रको अन्त्यसम्मको अनुमान लगाउँछन् र वास्तविक पनि त्यही पाउँछन् । र दिक्क मानेर चलचित्र हलबाट निस्कन्छन् ।
तर यो चलचित्रले भने त्यो अवसर दर्शकलाई दिएको छैन । दर्शकले अनुमान जे गरेका हुन्छन्, त्यही कुरालाई निकै आकर्षक ढंगबाट मोडिएको छ । र चलचित्रको मुख्य कथावस्तु पनि यही नै हो ।